🥇 Ukubalwa kwezimali ku-logistics
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 819
I-copyright ivikela izindlela ezihlukile zokuzenzakalela kwebhizinisi ezisetshenziswa ezinhlelweni zethu.
Singabashicileli besofthiwe abaqinisekisiwe. Lokhu kuboniswa ohlelweni lokusebenza uma usebenzisa izinhlelo zethu nezinguqulo zedemo.
Sisebenza nezinhlangano emhlabeni wonke kusukela kwamabhizinisi amancane kuya kwamakhulu. Inkampani yethu ifakiwe kurejista yamazwe ngamazwe yezinkampani futhi inophawu lwe-electronic trust.
Ividiyo ye-accounting ku-logistics
Lezi zintengo zivumeleke ekuthengeni kokuqala kuphela
Oda ukubalwa kwezimali ku-logistics
Alikho ibhizinisi elingasebenza ngempumelelo ngaphandle kwesistimu yokubalwa kwezimali esungulwe kahle yazo zonke izinqubo zokulawulwa, zomsebenzi owenziwayo, wokuhamba kwempahla nezindleko ezitholakele. Njenganoma iyiphi enye inhlangano, inkampani ye-logistics inezici zayo zomsebenzi, lapho uhlelo i-USU-Soft lujwayela ngaphandle kwezinkinga. Ngosizo lwale software, ukubalwa kwezimali ekuphendukeni kwezimpahla kuzophenduka kusuka enkambisweni yokusebenza kanzima nokuyinkimbinkimbi kube ithuluzi lokuhlaziya okuphelele, ukwenza ngcono nokwenza ngcono izinqubo ezikhona zenhlangano.
Ukuphathwa kwempahla, ukubalwa kwemali okudinga ukusetha izinguquko zedatha ngesikhathi sangempela, kudinga ukubuyekezwa njalo kwemininingwane nokulandelwa esigabeni ngasinye sokwenza i-oda. Uhlelo lwe-USU-Soft luhlinzeka ngokuvuselelwa kwedatha yamanje ngenxa yesigaba soHlelo lwezinkomba. Leli bhulokhi liqukethe imininingwane ehlelwe ngamafolda: Imali igcina izilungiselelo zezimali; usebenzisa ifolda yamaKlayenti, ungalandelela ukubuya kokukhangisa futhi wenze izibalo zokumaketha; Izinhlangano ziqukethe wonke amagatsha nohlu lwabasebenzi benkampani; kukhona nemininingwane eningiliziwe ngezinqubo zebhizinisi nezindawo zomsebenzi, amazinga okusetshenziswa kukaphethiloli, izindleko zezinsizakalo zabathwali bezinkampani zangaphandle. Isigaba sezinkomba sikuvumela ukuthi uzuze ukuzenzakalela kokuhlaziywa kwedatha nazo zonke izinhlobo zokubala ku-logistics accounting, okufaka isandla ekulungeni kwedatha nasekuqedweni kwamaphutha ahlobene nokusebenza kwe-accounting manual. I-Warehouse accounting ibamba iqhaza elibalulekile ekuphathweni kwempahla, futhi uhlelo oluhlongozwayo lokulawulwa kwempahla lusiza ukusungula imisebenzi esheshayo yokugcina impahla kanye nokugcwaliswa ngesikhathi esifanele kwezinqolobane ezinezingxenye zokungcebeleka zemikhumbi yezimoto. Ukubalwa kwezimali okusobala futhi kwenziwa lula ngohlelo lokuphathwa kwemibhalo kanye nokugunyazwa, lapho bonke abantu ababhekele ukwaziswa ngokufika kwamanothi amasha wenkonzo nokuqapha isikhathi sesabelo. Ngakho-ke, ukuhlelwa kwezinqubo zangaphakathi zenkampani kuyathuthukiswa.
Uhlelo lokubalwa kwezinsizakalo ze-logistics likuvumela ukuthi usungule ukusebenza okusebenzayo namakhasimende ngokugcina i-database yamakhasimende, ukudala izicelo zokuhamba, ukulandelela ukusebenza, nokulawula ukwamukelwa kwezimali. Umsebenzi wabaphathi ngaphansi kweso elibukhali labaphathi wenza izinsizakalo zezokuthutha zibe ngcono kakhulu futhi unikeza inkampani ithuba lokuncintisana. Ukubalwa kwamakhasimende ku-logistics ngosizo lwe-USU-Soft system of logistics control kulula futhi kuyashesha, ngenkathi uthola amathuluzi amaningi okusebenza ku-database ye-CRM. Isigaba Semibiko sikuvumela ukulanda imibiko yezezimali neyokuphatha kumasevisi ahlinzekiwe, izindleko ezitholakele, ukubuyiswa kwezindleko, ukulawulwa kwempahla kanye nenzuzo. Imibiko ingaqukatha amagrafu abonakalayo nemidwebo futhi kungenziwa nganoma yisiphi isikhathi. Ukubalwa kwezimali ku-logistics kunikeza amathuba amaningi wokuhlaziywa okuphelele kwebhizinisi, kufaka phakathi nomongo weyunithi ngayinye yezokuthutha. Inzuzo ekhethekile yesoftware yikhono lokuqapha njalo inqubekelaphambili yesondlo: imoto ngayinye kule mikhumbi inesimo sayo kanye nezinsuku zokulungiswa ezihleliwe, isidingo saso esixwayiswa uhlelo lokuphathwa kwempahla. Ngakho-ke, uhlelo lwe-logistics accounting luqinisekisa ukugcinwa ngesikhathi esifanele nokubheka isimo sezimoto, kanye nokutholakala kwemishini esebenza kahle yokwenza kahle kwama-oda.
Uhlelo lwe-accounting ku-logistics luyithuluzi elisebenza ngokwedlulele lokuqalisa izinhlelo zebhizinisi nokwenza ngcono izinqubo nokulawula ikhwalithi yezinsizakalo. Isoftware ye-logistics accounting ibeka konke ukusebenza ngendlela, futhi amakhasimende akho nakanjani azojabula ngezinsizakalo zakho! Uhlelo olubonakalayo lomsebenzi lukunika isithombe esiphelele sezinqubo eziqhubekayo: umzila onemininingwane yokuhamba ngakunye, ukulungela imoto, amaphuzu wokuhambisa nokuthulula, abenzi ababelwe, ukubalwa komzila nazo zonke izindleko, kanye nokutholakala kwamarisidi wemali kusuka kwiklayenti. Uhlelo lokulawulwa kwempahla luqinisekisa ukwenziwa kwenqubomgomo yezezimali efanele ngenxa yokuhlaziywa kokuhamba kwemali njalo nokuhlolwa kokusebenza kwezinqumo zabaphathi. Isoftware yokusebenza eyodwa yayo yonke iminyango nezigaba ikuvumela ukuthi ugcine umthwalo omkhulu futhi uhlanganise imininingwane yokusebenza kuyo yonke inkampani.
Ngenxa yokuguquguquka kwezilungiselelo zohlelo, isoftware ilungele noma yiluphi uhlobo lwenhlangano futhi ivumelanisa nokucacisiwe komsebenzi. I-USU-Soft warehouse accounting isiza ukugcwalisa ngesikhathi esifanele izinto ezigciniwe nokugcina izinto ngevolumu eyanele. Uthola uhlu lolwazi olunzulu mayelana neyunithi ngayinye yezokuthutha: izinombolo, izinhlobo, abanikazi, amandla okuphatha; kungenzeka futhi ukuthi ulayishe amadokhumenti, kufaka phakathi ama-passport ezobuchwepheshe. Isoftware isikhumbuza isikhathi sokufaka amadokhumende esikhundleni sezinto zokuhamba ukuhambisana nemithetho esunguliwe. Ukugcinwa kwezinguqulo ezi-elekthronikhi zemibhalo ehlukahlukene nakho kungenzeka ohlelweni (izinkontileka, amafomu oku-oda, ama-invoyisi, amakhadi kaphethiloli), kanye nokulayishwa kwabo ngokushesha. Ungadweba izinqubo zokuhlela ezihleliwe futhi ubheke ukusebenza kwazo. Ukuhlaziywa okuningiliziwe kokubalwa kwezimali zokugcina kanye nokuhlolwa kwenhlangano yomsebenzi wezinqolobane nakanjani kuzoba usizo olukhulu.
Umbala ohlukile nesimo samayunithi ezokuthutha siveza ngokusobala isithombe sesilinganiso sezimoto ezilungisiwe nezilungele ukusetshenziswa. Ukuhlanganiswa kolwazi lohlelo lwe-accounting newebhusayithi yenkampani yakho kuyatholakala, uma kunesidingo. Ulandelela imoto ngayinye: inani lezitobhi, izindawo nesikhathi sokupaka, ama-mileage nsuku zonke osukwini ngalunye, nokwazisa okusheshayo kwamakhasimende. Uzokwazi ukukhiqiza umbiko ngomsebenzi wesisebenzi ngasinye futhi uhlole ukusebenza kwakhe namandla akhe okusebenzisa kahle amahora okusebenza.
Uhlobo lwesikhalazo *Thenga uhleloUkubuza umbuzo UkucushwaEzomnothoOkujwayelekileUchwepheshe